नेपाल लाइभ मंगलबार, असोज ३०, २०७५, ०३:५५
_x000D_ तिमीसँग भेट नभएको पनि ठ्याक्कै पाँच वर्ष पूरा भएछ।
सुत्ने समयमा उठ्ने र उठ्ने समयमा सुतेर, प्रकृतिविरुद्ध हिँडेर पनि मैले आफूलाई मानसिकसँगै शारीरिक रुपमा स्वस्थ राख्न सकेको छु। मेरो खुसीको कुरा त्यत्ति छ।
थाहा छ मलाई, यहाँ आधुनिकताको नाममा धेरै परिवर्तन भए। तर दसैं तिमीले आफूलाई थोरै पनि नडगमगाई आफ्नो अस्तित्व स्वस्थ राखेका छौ। त्यसमा म अत्यन्तै खुसी छु।
१ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिमि क्षेत्रफलको जुनै कुनामा जन्मिने मान्छेले तिमीलाई असाध्यै माया गर्छ। तिमीसँग खुसी हुन्छ र रमाउँछ। तिमी महान् हौ र सदा महान् रहनुपर्छ।यो धरतीमा घामजून रहुन्जेल तिमी रहनुपर्छ। तिमीले खुसी, सद्भाव, समानता र संस्कार छरिरहनुपर्छ।
वृद्ध, नाबालक होस् या वयस्कस तिम्रो साथ चाहन्छ। तिमीसँग रमाउने इच्छा राख्दछ। तिमीसँग खुल्न चाहन्छ। तिमीलाई पनि थाहा छनि है!
मैले त्यो बेला वर्षमा एकजोर कपडा पनि तिमी आउने अवसरमा लगाउन पाउथेँ। अनि त्यो मामाघरमा हजुरआमाले दस रुपैंया पनि तिमी आएकै कारणले त दिन्थ्यो नि।
तिमीलाई थाहा छ दसैंरु तिमी आँउछौ भनेर त हो नि त्यो लिंगे पिङ ठड्याउने गरेको हाम्रो गाउँमा।डाँडाघरको जेठा दाइ क्यासेट बजाउदै गाउँ आउनु पनि तिम्रै कारणले त हो! अनि, हाम्रो घरमा दसैं तिमी आएको भनेर त हो नि खसी काट्ने, सेल पकाउने, बजारबाट चिउरा, फलफूल र मिठाई ल्याउने।
दसैं तिमी आएर त हो हामीले नयाँ लुगा, निधारभरि रातोटीका, जमरा लगाएर हजुरआमा,हजुरबुवाको आशीर्वाद लिन पाएको! तिमी साह्रै जाती छौ दसैं। लाग्न त सधैं तिमी आइरहू जस्तो लाग्थ्यो।
सधैं खुसी, हर्ष, उमंग छाइरहोस् जस्तो लाग्थ्यो। तर तिम्रा पनि त बाध्यता होलान् भन्ने सोच्थेँ।
वर्षमा एकैपटक आए पनि कति धेरै खुसी, हर्ष, उमंग बोकेर आउँथ्यौ। साराको ओठमा मुस्कान भर्थ्यौ। सबैको घर झिलिमिली उज्यालो बनाउँथ्यौ। दुस्खपीडा भगाउँथ्यौं। तिमीलाई भेट्न कति आतुर हुन्थ्यौं हामी। तर, आज तिमी आएर पनि त्यो गाउँमा त्यो ठाउँमा तिमीलाई भेट्ने सम्भावना छैन।
यसैगरि नभेटेको पनि आधा दशक बित्न लाग्यो। तिमीलाई धेरै नै सम्झेको छु दसैं। तिमीले बोकेर ल्याएको खुसी र उमङ्गमा धीत मरुन्जेल रमाउन मन लागेको छ। हजुरआमाको हातको टीकाजमरा र दस रुपैयाँ लिने रहर जागेर आएको छ।
लिंगेपिङ अनि भन्सार टोलका केटाहरुसँग ट्वेन्टी नाइन एकदमै खेल्न मन लागेको छ।तिमीलाई यति लामो समयपछि पनि भेट्न नपाउँदा मन निकै खल्लो अनि उदास छ।
तिमीलाई पनि थाहा छ नि। म रहरले हैन, बाध्यताले तिमीलाई भेट्न नसकेको हुँ। गैरीखेत पसले साहुले नहडपेको भए, छानाको टिन बुवाले फेर्न सकेको भए, म हरेक वर्ष नियमित आउने दसैंसँग यसरी टाढा हुनुपर्ने थिएन।
अब त पसले बूढाको पैसा पनि तिरिसकेँ, अस्ति बैसाखमा छानालाई नयाँ टिनले ओढाएँ। नजिकै आएको तिमीलाई स्वागत गर्न आमाले भित्ताहरुमा पनि कमेरो दल्दैछिन् रे। झ्याल र ढोकामा पनि बजारबाट निलो रङ ल्याई रंगीन बनाइएको खबर प्राप्त गरेको छु।
पारि टोलका केटाहरुले पिङका लागि बाँस ढालेका फेसबुकमार्फत भर्खर थाहा पाएँ। भन्सार टोलमा नाचगान गर्न मञ्च बनिरहेको छ। वर्षको एकपटक बाटोहरुले पनि स्याहार पाएका छन्। बिजुलीका खम्बाहरुमा सय वाटको बत्ती झुन्ड्याएर गाउँ नै उज्यालो बनाइसके। यी सबै दुरबाट सुन्न विवश छु।
मलाई भेट्न नपाए पनि तिमी राम्रोसँग आएर जानू। सबैसबैमा खुसी, हर्ष अनि उल्लास छरेर जानू। नमरे बाँचे कालले साँचे अर्को साल तिमी आउने समयमा म त्यो गाउँमा अवश्य आउनेछु।
_x000D_ आफ्नो अस्तित्व, महत्व, संस्कार र पहिचानलाई कहिले पनि डगमगाउन नदिनु है!
हुन त यो विरानो सहरमा पनि तिमी आएको नक्कल गरेर झुटो खुसी हुन खोजिँदो रहेछ। तिमीलाई चटक्कै बिर्सेर दशकौं बिताएकाहरु पनि तिमी आउने साइत हेरेर रमाउन खोज्दा रहेछन्। तर सबै मिथ्या लागिरहेछ मलाई।
न त धान झुलेको छ। न त कोदो फुलेको छ। न लालुपाते नुहेको छ। न लिङ्गेपिङ झुन्डेको छ। बेकारमा मान्छेहरु अलमलिएका मात्र हुन् जस्तो लागेको छ मलाई।
आई, रियल्ली मिस यु सो मच दसैं।
(हाल दक्षिण कोरिया)